बुद्धि दाँत गालामा के बढ्छ भने?
हरेक दाँत यसको आफ्नै नाम छ। उदाहरणका लागि, केही cutters भनिन्छ, जबकि अरु - molars। तर त्यहाँ लोकप्रिय रूपमा जानिन्छ जो4दाँत, छ "बुद्धि दाँत।" सायद नाम सामान्यतया जीवन पछि देखा किनभने तिनीहरूले प्राप्त, र कहिले काँही उनि बढ्न छैन। तर के बुद्धि दाँत गालामा वा छेउमा dentition मा बढ्छ भने?
यो समस्या गम्भीर छ र जरुरी हस्तक्षेप दन्त शल्यचिकित्सक आवश्यक छ। तथ्यलाई बुद्धि दाँत बढ्दै गर्दा हो, र त यो तापमान एक aching दुखाइ र सुनिंनु देखि बेचैनी धेरै दिन्छ। अक्सर गंभीर अवस्था यसलाई पूर्ण सीधा कटौती पनि, "बुद्धिमान मानिसहरू" को हटाउन आवश्यक छ। दांत gingival ऊतक माथिबाट हुड पूर्ण भताभुङ्ग छ भने र एक "चदंवा" गठन यस हुन सक्छ। तरल वा खाना कणहरु त्यहाँ भित्र पस्नु र रूपमा गंभीर सुनिंनु कारण, सक्नुहुन्छ सम्भव टाढाको स्थान सफा गर्न।
यस मामला मा सञ्चालन4भन्दा बढी मिनेट लाग्नेछ, तर बुद्धि दाँत गालामा मा बढ्छ भने, यो अवस्था गर्न दृष्टिकोण धेरै लामो हुनेछ, र postoperative पुनर्वास पनि धेरै समय लाग्नेछ। जब बुद्धि दाँत मार्फत कटौती, त्यसपछि उहाँलाई लागि ठाउँ को कमी को dentition वा skuchkovanie दाँत सार्न सक्छ। यस मामला, अत्यन्तै खतरनाक छ किनभने यो मौखिक गुहा यी महत्वपूर्ण घटक को मात्र होइन स्थिरता, तर पनि मसूडों उलङ्घन। यसलाई केही दाँत चाँडै गम आफ्नो बलियो आसंजन गुमाउनु र बाहिर पतन हुनेछ भनेर संभावना छ। कम से कम 1 वर्ष - र, तैपनि खानको बहाली पैसा र धेरै समय यसलाई धेरै लिन थियो लागत।
यो नतिजा पनि वृद्धि को प्रारम्भिक चरणमा हुन सक्छ निर्धारण बुद्धि दाँत अन्य दाँत भन्दा एकदम अब बढ्दै छ कि सम्झना, र गलत स्थान सूचना र महत्त्वपूर्ण छ। एक्स-रेज को मद्दत वा समस्या भविष्यवाणी र पनि दाँत वृद्धि पहिलो संकेत अघि rudiments हटाउन सल्लाह गर्न सक्छन् गम दाँत भविष्य केलाएर विकास संग तर दक्ष विशेषज्ञहरू। को समस्या एक यस्तो दृष्टिकोण को buccal mucosa र सम्भव पछि समस्या संग छेडछाड रोक्न "बुद्धि दाँत गालामा मा बढ्छ।" साथै, सञ्चालन कम से कम नतिजा संग ठाँउ लिन्छ, र जोखिम कम जटिलताहरू छ। एउटा सञ्चालनको यस्तो लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर - किशोरावस्था।
बुद्धि दाँत गालामा मा बढ्छ भने जो, तपाईं को लागि प्रतीक्षा छ सबैभन्दा ठूलो खतरा - गालामा भित्र श्लेम लाग्एको झिल्ली गर्न क्षति छ। यो, एकदमै खतरनाक छ किनभने यो केवल सुनिंनु वा ulceration, तर पनि क्यान्सर को नतिजा नेतृत्व गर्न सक्दैन। असामान्य स्थिति संग दाँत सधैं हटाउन पर्छ। सञ्चालन गरेपछि सम्भव जटिलताहरू, किनभने यसको जरा पर्याप्त ठूलो र गहिरो छन्। केही समय किनभने दुखाइ शक्ति आपूर्ति र खुला घाउ संक्रमण को संभावना संग एक समस्या हुन सक्छ। किन हो यो postoperative अवधि को मौखिक गुहा (जस्तै, सोडा) disinfecting, प्रत्येक भोजन विशेष संरचना पछि rinsing आवश्यक छ। पनि अनावश्यक जडीबुटी को decoctions छिटो गम निको मदत र भडकाऊ प्रक्रिया (camomile, सोडियम कार्रोप्नेट समाधान, धेरै कमजोर कम गर्न छैनन् पोटासियम Permanganate को समाधान वा आयोडिन र जस्तै)। अक्सर सञ्चालन समयमा वा पछि पुग्न सक्छ जो संक्रमण, जोगिन एन्टिबायोटिक को पाठ्यक्रम आवश्यक छ।
र यो एक बुद्धि दाँत erupts र सुरु जहाँ एक अनुभवी योग्य टेक्नीसियन धेरै पहिले समस्या को धेरै यो मुद्दा उद्धार गर्न, र सम्बोधन गर्न एक स्थिति को लागि प्रतीक्षा गर्न राम्रो छ, सम्झना। लामो र अप्रिय postoperative अवधि जोगिन र गिजा वा जिब्रो गर्न सम्भव क्षति रोक्न मात्र तरिका हो।
हामी तपाईंलाई स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ सुन्दर मुस्कान!
Fillings के हुन्? दन्त चिकित्सा मा fillings को प्रकार
को tartar दुख हटाउन चाहे? अल्ट्रासाउंड संग tartar हटाउँदै: समीक्षा
विदेशी मुद्रा: "लेनदेन को मात्रा के हो"
"मेनिफ्टफ्ट" मा परमाणु रिएक्टर (योजना)। Ic2 प्रयोगात्मक रिएक्टर schematics
कसरी राम्ररी आफ्नो बाल धुन
संवैधानिक र कानुनी मान्यता
कसरी चलाउन: शुरुआती लागि सुझावहरू।
परिवहन कम्पनी "व्यापार रेखा": एक समीक्षा। रूस मा ट्रकिंग